Multi-basa kunyorera kwekubata mumwe muchina - Nhau - Shenzhen VisionVision Technology Co LTD
Imba > Nhau > nhau dzekambani > Multi-basa kushanda kwekubata mumwe muchina
Multi-basa kushanda kwekubata mumwe muchina
Mune inowedzera inokwikwidza bhizimusi munda, kushambadzira muchina wekusimudzira kwakakosha uye kunofanirwa kuve kunokwezva, kuitira kuti vatengi vanogona kudzidza nezve zvigadzirwa zvavo, kuti vawedzere kuoneka, kusimudzira mufananidzo wekambani, uye kuvaka yavo yega brand. Gadzira mabhenefiti chaiwo. LCD michina yekushambadzira yakasiyana neyechinyakare kushambadzira uye kushambadzira kweTV Iyo yepamhepo yekushambadzira muchina inogona zvirinani kukwezva kutariswa kwevaoni. Munzvimbo dzakazara vanhu, zvinogona kurega munhu wese achigara kwenguva pfupi yakadaro. Mumasekondi, mhedzisiro yacho haikwanisiki. Izvo hazvizoite kuti vateereri vanzwe kunetswa, asi zvinokwezva vashandisi kuti vatarise nesimba. Maitiro emuchina wekushambadzira unonyanya kujeka.
Izvo zvekushambadzira ndezvekuita musitayera uye zvakasarudzika muchitarisiko, zvichionekwa munzvimbo dzakasiyana nenzira yekuti veruzhinji vangangodaro vachiona. Ivo ndeanoverengeka uye akasarudzika, akapfuma mune zvemukati, akapfupika uye ane rupo, hombe mukuzivisa, uye anoshanda uye ane hupfumi. Iwo makwikwi akakosha emabhizinesi mazhinji ekuwedzera kutengesa kwezvigadzirwa. "Zvombo" zvinogona kukwezva vatengi vazhinji kuti vazosvika pakunzwisisa nekutenga zvigadzirwa, vachizadzisa hunyambiri hune mufaro wevatengi uye kugutsikana kwevatengesi.
Iyo yekubata ese-mu-mumwe muchina unobatanidza akawanda mabasa eprojekita, yemagetsi chena bhodhi, ruzha, TV, uye vhidhiyo musangano terminal, iyo pakati inogadzirisa kure kure kutaurirana mumusangano, yakakwira-tsananguro kuratidzwa kwemagwaro emusangano, vhidhiyo faira kutamba, rarama odhiyo, skrini kunyora, uye mafaera Akarongeka musangano zvinodiwa sekumaka, kuchengetedza, uye kugovera. Parizvino, kune akawanda anobata zvese-mu-chimwe zvigadzirwa pane musika. Kunyangwe iwo mabhureki akasiyana, mazhinji emabasa akafanana, kunyanya inosanganisira waya isina fungidziro, chena chena kunyora, musangano uri kure, kubata kubata uye mamwe mabasa.
Isu tinowanzowona michina yekushambadzira munzira kana mumahotera, maresitorendi, nhandare dzendege, mabhangi nedzimwe nzvimbo. Uku ndiko kusimudzira kwekumira muchina wataurwa muchinyorwa chanhasi. Izvo zvaunowanzoona zvakanyatsogadziriswa kushambadzira mutambi, uyo anowanzo pedzisa iyo screen loop playback, asi ita iwe unoziva zvekuita kana iwe uchida kuchinja iyo yekutamba skrini?
Bata zvese-mu-imwe yakamira-yega vhezheni
Paunenge uchitsiva iyo skrini yemira-yega yekushambadzira muchina, unofanirwa kutora memori kadhi mumushini wekushambadzira, kuteedzera chirongwa, skrini, uye vhidhiyo yaunoda kutsiva yakananga mukombuta, wozoisa memory kadhi mu muchina wekushambadzira kugadzirisa uye kutamba Just order. Uku kuvhiya kwakangofanana nekutora zvirimo pakombuta ine U disk, iri nyore uye nekukurumidza.
Bata mumwe muchina online vhezheni
Kana iwe ukaisa yakawanda yekushambadzira michina uye uine yakafara kufukidza, isu kurudzira kuti vatengi vashandise iyo yepamhepo vhezheni yekutwasuka kushambadza muchina, nekuti zviri nyore kuchinja skrini zvakafanana. Nekuti mune iyo nhamba yakakura yevatambi vekutengesa, kana iyo yakamira-yega vhezheni inoshandiswa kushandura zvirimo, zvinoda yakawanda manpower kubvisa iyo Kadhi uye isa kadhi. Ipapo iyo online vhezheni iri nyore. Iwe zvinongoda kurodha zvirimo pane network network kuburikidza neInternet. Zvino, kana chinotsiviwa chikapihwa, zvese zviri mukati meiyo mira muchina wekushambadzira unozotsiviwa kamwechete, unoshanda uye zviri nyore.
Idzi pamusoro ndidzo nzira mbiri dzakakurudzirwa dzekuchinja iyo skrini yeiyo yakamira kushambadzira muchina. Isu tinosarudza michina dzakasiyana dzakasiyana mashandiro, uye maitiro ekuchinja kumeso akasiyanawo Shenzhen vertical kushambadza mutambi mugadziri ctvs anokurudzira kuti iwe sarudza iyo mhando yekushambadzira mutambi maererano nezvako zvekushambadzira zvaunoda. Kana iwe chete inoda kuishandisa munzvimbo imwechete, ipapo iyo yakamira-yega vhezheni yakakwana. Kana kukwidziridzwa kukuru, zvinotora nguva yakareba. Inokurudzirwa kushandisa iyo shanduro yepamhepo. Ndinovimba kubatsira munhu wese.
1. Inopindirana yekubata mubvunzo
Midhiya yekushambadzira muchina wakagadzirirwa kurerutsa mashandiro evanhu pamakomputa, uye basa rayo guru kubvunza ruzivo. Vagadziri vanogona kugadzirisa software yemubvunzo zvinoenderana nezvinodiwa nemaindasitiri akasiyana. Vaparidzi vanogona kupinda nekusunungura ruzivo rwakakodzera. Vashandisi vanongoda kutevedzera zvinokurumidza uye kubata iyo yekubata skrini kuti vabvunze ruzivo uye masevhisi avanoda. Inokurumidza, yakapusa uye inogoneka. Ruzhinji ruzivo mubvunzo, kuzvishandira-basa bhizinesi kugadzirisa uye mamwe mabasa akawedzera kusangana kwevanhu-komputa.
2. Simple oparesheni, yakachengeteka uye yakavimbika
Kunyangwe mashandisiro emakomputa ari kufarirwa kwazvo mazuva ano, havazi vese vanogona kushandisa zvinehunyanzvi tsika yekomputa mbeva nekhibhodi kuti ishande. Iko kunyorera kwekubata mubvunzo wese-mu-mumwe muchina kunogadzirisa zvakakwana dambudziko iri. Kushanda kwayo hakudi kushandiswa kwekhibhodi uye mbeva. Kana iwe uchida kutarisa chimwe chinhu, iwe unongofanirwa kubata chigunwe kuti uwane mhinduro, iyo inonyanya kufambisa mashandiro. Imwe pfungwa ndeyekuti inoita mashandiro evanhu pakombuta yakavharwa zvachose pakombuta, isina keyboard uye mbeva, yakachengeteka uye yakavimbika, uye haizokanganisa mashandiro ehurongwa nekuda kwekushandisa kwevashandisi.
Yapfuura:Fungidzira Vision inokuudza hunhu hwekubata ese-mu-one mafomu mumashopu ezvitoro
Tevere:Ndezvipi zviri nani, zvese-mu-imwe komputa kana komputa desktop?